ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: •.¸¸.* MERRY CHRISTMAS 2008 & HAPPY NEW YEAR 2009 *.¸¸.•
•.¸¸.* MERRY CHRISTMAS 2008 & HAPPY NEW YEAR 2009 *.¸¸.•
ဘလော့ပေါ် မရောက်တာ တလနီးပါး ကြာသွားပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့
ကိုယ်ဝန်ကြီး ၉လနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ၃နိုင်ငံ ခရီးသွားပါတယ်။
ပြန်ရောက်တော့ ကလေးက သူလဲ အပြင်ထွက် လမ်းလျှောက်ချင်တယ် ထင်ပါရဲ့.. ဆေးရုံ ရောက်သွားပါရော…
ကုတင် အကျယ်ချုပ် ၃ရက် ကျပါတယ်။ (စိတ်ပိန်လိုက်တာ လွန်ရော)*
ဆေးရုံက ဆင်းတော့လဲ အာမခံ ၃ချက်နဲ့ ဆင်းရပါတယ်။
၂ကီလိုထက် လေးလံတာ မ “မ” ရ။
လှေကား အတက်အဆင်း များများ မလုပ်ရ။
အနှစ်ချုပ်ကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး လူရော စိတ်ပါ နားပါ.. တဲ့။ ရက်မစေ့ဘဲ လုံးဝ မမွေးပေးပါ.. တဲ့။ ဒါကြောင့် နားလိုက်ပါဦးမယ်။
နှစ်သစ်မှာ ပြန်လည် ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ နော်။ နှစ်သစ်မှာ လူသစ်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်နော့ :D
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 12:13 AM
ပြောရဆိုရ ခက်လိုက်တာနော်။ ပြောပြန်ရင်လည်း မိကျောင်းမင်း ရေခင်းပြသလို ဖြစ်အုံးမယ်။ အနေအထိုင် ဆင်ခြင်။ ဒါပဲ။
ကိုလူသစ်ကိုတောင် သတိရသွားတယ်.. ဟိ....
online ခဏခဏမတက်ရလို့ နောက်စည်းကမ်းချက်တစ်ခုထပ်ထုတ်ပေးလိုက်မယ် .. ဟဲ ဟဲ ..
You brought into existence asababy
a mother's womb. Didn't you.
I think May your body become thin due to about that.
Don't be say စိတ်ပိန်လိုက်တာ.
May be I no understand above meaning.